ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: တရုတ်ပြည်မှာ အသက် ၇၇ နှစ်အရွယ် ဆရာဝန်မကြီး အ၀တ်မပါ ကိုယ်ဗလာနဲ့ တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ)
တရုတ်ပြည်မှာ အသက် ၇၇ နှစ်အရွယ် ဆရာဝန်မကြီး အ၀တ်မပါ ကိုယ်ဗလာနဲ့ တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ)
သူမရဲ့ နေအိမ် အဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက အသက် ၇၇ နှစ်အ ရွယ်ရှိ ဆရာဝန်မကြီး ကျွမ်းကျင်ဟွေးဟာ တရားမျှတမှုကို အလွန်အမင်း လိုလားတဲ့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ် လ ၁၈ ရက်နေ့က ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ တရားရုံးတခုရှေမှာ အ၀တ်မပါ ကိုယ်ဗလာနဲ့ ဒူးထောက်ကာ တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ မြို့ပြစီမံကိန်းတွေ အကြီးအကျယ် ဖော်ဆောင်လာတာမို့ အိုးအိမ်တွေ အတင်းအကျပ် ရွှေ့ ပြောင်းစေမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေ၊ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာ မ ပြောင်းရွှေ့မီ ရက်အနည်းငယ်သာကြိုတင်အကြောင်းကာ အိမ်ပိုင်ရှင်တွေကို မောင်းထုတ်ရွှေ့ပြောင်းစေတတ် တာမို့ ပြည်သူအများ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခဲ့ကြရပါတယ်။
၎င်းတို့ပေးတဲ့ နစ်နာကြေးတွေကလည်း လက်ရှိပေါက်ဈေးထက် များစွာလျော့နည်းနေလေ့ရှိပါတယ်။ ကြားဖူး၊ ဖတ်ဖူးတာက ကွန်မြူနစ်တရုတ်ပြည်မှာ ဆန္ဒပြရင် အစိုးရက ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတာမို့ ဆန္ဒပြမှု တွေမရှိဘူးလို့ ဆိုတာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် မိမိတို့ရဲ့အိုးအိမ်တွေ ဆုံးရှုံးနစ်နာရမှာ အမှန်ဆိုတော့ တရုတ်တွေလည်း ထောင်မကြောက်၊ တန်းမ ကြောက်၊ သေမှာမကြောက်နိုင်တော့ဘဲ ဆန္ဒပြတော့တာပါပဲ။ ထိုစဉ်တုန်းကလည်း အဆိုပါဆန္ဒပြသူတွေဟာ ရှန်းဟိုင်းမြို့လယ်နဲ့ နီးတဲ့ ၎င်းတို့ရပ်ကွက်ကို နစ်နာကြေး အနည်းငယ်သာပေးပြီး အတင်းအဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်း ခိုင်းလို့ ဆန္ဒပြကြတာလို့ ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။
ကွန်မြူနစ်တွေ အုပ်ချူပ်လို့ ဘာသာတရားမရှိတဲ့ (တရုတ်ပြည်သားအများစု အထူးသဖြင့် ၃၀ ကျော် ၄၀ အ ရွယ်တွေပါ) တရုတ်တွေဟာ အစိုးရရော၊ ပြည်သူတွေပါ အရှက်အကြောက်မရှိကြတာကတော့ အထင်အရှား ပါပဲ။
အခုလိုမျိုး ပညာတတ်အမျိုးသမီး (ဆရာဝန်မ) တယောက် အ၀တ်ဗလာနဲ့ လူမြင်ကွင်းမှာ ဆန္ဒပြဖို့ဆိုတာ မြန် မာပြည်မှာတော့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ ( တခါမှလည်း မကြားခဲ့ဖူးပါဘူး)။
တရုတ်မုန်းတာနဲ့ပဲအားလုံးသိမ်းကြုံးပြောနေပါလား အရှက်ဆိုတာဘာလဲ မင်းသိပုံမရဘူး အဝတ်အစားလုံလုံခြုံခြုံဝတ်မှ အရှက်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တာလား ချီးဦးနှောက်ရယ် ခိုးဆိုးလုယက် နိုင်ငံတကာမှာ သူများလူမျိုး တွေဆိုအချင်းချင်းကူညီတယ် အောက်တန်းစားဗမာတွေကတော့ အချင်းချင်းပြန်သမတယ် ဒါကိုအရှက်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား ဗမာခေါင်းဆောင်ဆိုစောက်ရှက်မရှိ ဗျောင်လိမ်ဗျောင်စားတွေကျတော့အရှက်ရှိကြတယ်ပေါ့ မင်းတို့ဗမာလူမွဲတွေက ကိုယ်ဆင်းရဲတိုင်း တရုတ်တွေကိုလိုက်မနာလိုဖြစ်နေတာ မင်းတို့ဗမာတွေဆိုရင် တိုင်းရင်းသားအကုန်လုံးက သတ်ချင်နေတာလေ အရှက်ရှိကြလို့ပေါ့ဟုတ်လား အာရှမှာဖာအများဆုံးကလဲဗမာတွေပဲ အရှက်ရှိကြလို့ထင်တယ် ဗမာမတွေရှက်ကြပါတယ် လူရှေ့မချွတ်ပါဘူး ကွယ်ရာမှာတော့ကွာ မြန်မာငွေငါးရာနဲ့ ပေါပေါလောလော ကာမဆက်ဆံလို့ရတာ ဗမာမတွေပဲရှိတယ်
ခင်ဗျားကလဲ ကမ္ဘာမှာ ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ဆန္ဒပြတာမဆန်းပါဘူးဗျာ။ ကျနော်ကတော့တရုတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်တွေက ဗမာတွေထက်အရှက်ရှိလို့ ဗမာပြည်လောက်အခြေအနေမဆိုးတာပေါ့ဗျ။ ခင်ဗျားနှယ်ရှင်းရှင်းလေးကို ကိုယ်လိုရာဆွဲတွေးနေတယ်။ အရှက်မရှိတာက ဗမာဗျ။ နောက်ဆရာဝန်တွေ၊ ဆရာဝန်မတွေဆိုတာ အထိအတွေ့တွေနဲ့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ တခြားငွေရလမ်းကြီးတဲ့ လောကတခုပြီးရင် ဒုတိယလိုက်တယ်။ မိန်းမကိစ္စ၊ ပညာရဖို့၊ ရာထူးရဖို့၊ ကိစ္စတွေမှာ အကျင့်သိက္ခာအားနည်းကြတယ်။ ခင်ဗျားသိမှာပေါ့ဒါတွေ၊ ဆာဂျင်ဆိုတဲ့လူတွေအဆိုးဆုံးပဲ။ သူများလျှောက်မပုတ်ခတ်နဲ့၊ သူများလျှောက်ပုတ်ခတ်တာ ပညာမတတ်ဘွဲ့ရတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ဗျ။ ခင်ဗျားနှယ်ဗျာ။
သြော် ...ဆိုးလိုက်တာ ဆိုးလိုက်တာ တရုတ် .. ဒါကြောင့်လည်း တရုတ်ဆို ကမ္ဘာမှာ ... ကျွတ် ကျွတ်
ရှက်စရာကြီးပါလား ... သွပ် သွပ်
အင်း.. insideMZ ကိုတော့ pornsite တွေ အကုန်ကြည့်ခိုင်းဦးမှ ဒါမှ တရုတ်မတွေအာရှတွင်မကဘူး ကမ္ဘာပတ်ပြီး နေထိုင်ခွင့်လေးရအောင် ဖင်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာ သိသွားအောင် ... ဟိ
Dr.lumswe,thank you very much.
ခွေးမသား ဗန်ဒူးလဆိုတဲ့ကောင် မြန်မာပြည်ကမင်းတို့ပိုင်တာလား စောက်ရူးရာ သမိုင်းလေးလဲဖတ်လိုက်အုံး ဗမာလူမျိုးတွေဆိုတာ တရုတ်ပြည်ကဆင်းလာတဲ့ကျွန်လူမျိုးတွေ မင်းတို့ကိုကြည့်ရတာဘယ်လူမျိုးရှိလဲ ကချင် ကယား ကရင် ချင်း ရှမ်းအကုန်မင်းတို့ကိုသတ်ချင်နေတာ စောက်ရူးတွေ မင်းတို့အောက်တန်းစားဗမာအစိုးရက တိုင်းပြည်ကို ရောင်းစားတယ် မင်းတို့အောက်တန်းစားဗမာအတိုက်အခံတွေက လဲ အချင်းချင်းစားနေကြ ကောင်းတာဘာရှိလဲ ဒေါ်စုဘာလို့ အင်းဂလိပ်ကိုယူလဲသိလား မင်းတို့ဗမာထီးတွေသုံးစားလို့မှမရတာကွာ ရှင်းလား သမိုင်းပြန်ဖတ်ကွာ မင်းတို့ဗမာတွေပဲ အဲဒီအရှက်မရှိတဲ့တရုတ်တွေဆီမှာကျွန်ခံနေတာစဉ်းစားတာကြည့်ပေတော့ကွာ မင်းတို့ဗမာပတ်ပို့နဲ့ အပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်ပါကွာ နိုင်ငံတကာကခွေးလိုပဲဆက်ဆံနေတာ ဗမာဆို ငါတို့ကခွေးလောက်တောင်တန်ဖိုးမထားတာကွာ တရုတ်တွေကိုအသာထားလို့ထိုင်းလောက်ပဲ အရင်ယှဉ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါကွာ ထိုင်းမှာတောင်ကျွန်ခံနေရတဲ့အကောင်တွေက ခွေးပါးမဝကြနဲ့
အော်ဗမာတွေ တော်တော်ယဉ်ကျေးကြပါလား ဖေ့ဘုတ်မှာလဲဆဲ ဘလော့တွေမှာလဲဆဲ အိမ်သာထဲမှာလဲဆဲ တရုတ်တွေ့လဲဆဲကုလားတွေ့လဲဆဲ တိုင်းရင်းသားတွေကိုလဲဆဲ ဘန်ကီးမွန်ကိုလဲဆဲ ကုလကိုလဲဆဲ ကိုယ်တိုင်ကတော့ဘာမှအဖြစ်ရှိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး ဗမာဖာမတွေငါးရာတောင်မဟုတ်ဘူး သုံးရာနဲ့တောင်ရတယ် သီရိ မင်္ဂလာဈေးသွားကြည့်လိုက် ဟုတ်လား မင်းတို့တွေမသိချင်ယောင်ဆောင်မနေပါနဲ့ကွာ တိုင်းပြည်ကလဲစုတ်ပြတ်နေတာပဲ အာကတော့အတော်ကျယ်တယ်ကွာ အဖြစ်မရှိတာတခုပဲ ဆဲဖို့ဆိုရင်တော့လာထားပဲ ဗမာတွေ မိုးမွှန်အောင်ဆဲပြလိမ့်မယ် နိုင်ငံတကာမှာဘိတ်ချီးဖြစ်နေပြီ လေကောင်းတုန်းဆဲလို့ကောင်းတုန်း
Get out now!chinese bagger and stateless.
Myanmar is more worse than chinese people. don't be upset. ok?
ခင်ဗျားတို့မို့လို့ အရှက်မရှိပြောရဲတယ်။ ခင်ဗျားတို့သာ ပြည်ကြီးပေါက် တရုတ်တွေဆိုရင်တော့ သူနိုင်ကိုယ်နိုင်ပြန်ပြောတာ အားရစရာပါဘဲ။ မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်တွေ မကောင်းကြောင်းရေးထားတာလဲ မတွေ့မိပါလား။ ခင်ဗျားတို့ ဒီဘလော့ပေါ်မှာ ဒီလို comment ရေးနိုင်အောင် ကကြီး၊ခခွေးကို မြန်မာဆရာမတွေ သင်ပေးထားတယ်ဆိုတာလည်း မမေ့နဲ့ဦး။ မြန်မာပြည်က ဆန်၊ရေ နဲ့ လူဖြစ်လာပြီး သရေပေါ်အိပ်၊သရေနားစားတော့ မလုပ်ကြနဲ့.